Ny vavahady Baldur's Gate II dia tonga amin'ny Android amin'ity Noely | Androidsis
Fanampiny tsara iray hafa amin'ny Play Store rehefa tonga RPG izao miaraka amin'ny Baldur's Gate II Enhanced Edition. Ny iray amin'ireo RPGS angano dia efa manana ny toerany ao amin'ny Play Store hany ka alaina an-tsokosoko sy azon'ireo mpilalao an-tapitrisany izay nahita ny toerana fialamboly sy fialambolin'izy ireo tao amin'ny magazay Google.
Hatramin'ny nahatongavan'ny voalohany Ny vavahadin'i Baldur y ny tohiny Icewind Dale, efa te hihaona izahay manoloana ny vavahady II an'i Baldur hahafahany miditra amin'ny fiainany mahagaga sy ny tontolony manokana. Iray amin'ireo RPG tsara indrindra teo amin'ny tantara ary tonga amin'ny Play Store amin'ity fotoana Krismasy ity mba hahatonga anao te-hanatsoaka sabatra indray, esory ny ampinga ao amin'ny tratran'ny fahatsiarovan-tena, ary omeo ny ozanao ny ozona be indrindra azo atao explosives sy curatives. Miverina amin'ny Android indray ny saga iray lehibe.
1 Dungeons & Dragons amin'ny fotony rehetra
2 Angano RPG
Dungeons & Dragons amin'ny fotony rehetra
Dungeons & Dragons dia manolotra ny lalàna, ny fametrahana azy rehetra ary na dia ny sasany amin'ireo mekanika filalaovana aza mifandraika amin'ny ady amin'ny fotoana misy an'i Baldur's Gate II. Anisan'ny iray amin'ireo kalitao lehibe, raha milalao amin'ny tena izy, ny fahafahan'ny manakana ny lalao handamina amin'ny fomba tsara indrindra inona ny dingana manaraka tokony horaisina ary inona ny paikady tianay hanafoanana io vondrona fahavalo io na ilay sefo izay te hampijanona antsika ny dingana amin'ny alàlan'ny toerana samihafa izay ho hitantsika amin'ity sangan'asa lalao video ity.
Ny teboka fanombohan'ny Baldur's Gate II dia Shadow Amn, mitarika ny fizotran'ny hetsika rehetra hatrehin'ireo mpilalao. Ary miomàna mandritra ny lalao maherin'ny 50 ora izay mety hitarina hatramin'ny 100 ora miaraka amin'ny atin'ny fanitarana tafiditra sy ny asa fitoriana.
Ny fidirana amin'i Baldur's Gate II amin'ny vidin'ny € 8,99, na dia mividy ao anaty fangatahana aza ianao dia vintana lehibe ary bebe kokoa amin'ireo fialantsasatra ireo izay apetraka amintsika amin'ny fahatongavan'ny Krismasy. Sary nihatsara, ny tantara mety indrindra, ny halalin'ny Dungeons & Dragons ary ity cocktail tsy mampino ity izay mahatratra ny paosinao amin'ny alàlan'ny finday avo lenta na takelaka misy anao. Tokony hotolorana hevitra fa, na dia azo lalaovina amin'ny alàlan'ny telefaona aza izy io, dia misy takelaka ho fitaovana tsara indrindra noho ny haben'ny efijery lehibe kokoa.
Ilaina amin'ny antsipiriany izany ny micropayments dia tsy hisy fiatraikany amin'ny gameplay mihitsy ary azonao atao ny mamita ny lalao tsy misy fividianana, satria izy ireo dia ny fahazoana mpikambana vaovao ho an'ny vondrona sy ireo safidy vitsivitsy hanamboarana ireo maherifontsika amin'ny fomba mihaja. Tonga ao amin'ny Android miaraka amin'i Baldur's Gate II ny fisehoan-javatra mahatsikaiky.
Vavahady II an'i Baldur
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Hita ao amin'ny Play Store ny angano vavahady Baldur's Gate II Enhanced Edition
Sony dia miomana ny handefa ny Xperia Z4 Tablet Ultra miaraka amin'ny efijery 12,9-inch